Hernia Intervertebral. Indlela ubaphathe ngayo?
Ngokwezibalo, namuhla ayizinkulungwane eziyikhulu akhawunti cishe 100 amacala izifo ezihlukahlukene lamadiski herniated. Nokho, akubona bonke uyazi mayelana izimpawu eziyinhloko nezindlela ukwelapha lesi sifo. Kulesi sihloko sizohlola umbuzo yini akha hernia intervertebral, futhi ngalokho uhlobo ukwelashwa inikeza kulezi zimo imithi.
Ukuze siqonde ukuthi ziyini lolu hlobo isifo, kufanele kube kancane ujule anatomy zomzimba womuntu. Lokho okubizwa ngokuthi i disk intervertebral lizungezwe indandatho fibrous. Lesi sifo livela kunjalo lapho indandatho fibrous ngasizathu simbe sinqamukile, futhi akhiwe ngaphakathi kuyi-nucleus disc kugudlukela kancane. It ke uthuthela umsele intervertebral, lapho umthelela izinzwa ezihlukahlukene spinal cord amaseli, okuholela zibe, izinhlungu nokuphatheka kabi.
hernia Intervertebral. izizathu
Ukungawuvivinyi umzimba, umsebenzi sedentary nokuzijabulisa yokwenziwa - kukhona izimfanelo yokuthi umuntu angase avele hernia intervertebral. Uma ukholelwa ukuthi ochwepheshe, iqembu ingozi kuhlanganisa abantu abasukela eminyakeni engama-25 kuya ku-50. Njengoba isizathu esiyinhloko ochwepheshe shayela okulandelayo: ukulimala mechanical, amagalelo ngemuva, izinsimbi, badedelane abukhali, nokunye. Engozini futhi labo bantu asebavele ukuma ugobile noma osteochondrosis. Intervertebral izimpawu hernia ahlukile futhi ihluke nomunye indawo lesion (lumbar, wesibeletho, neminyango thoracic). Ukuthola okwengeziwe, sicabanga hernia lumbar.
Intervertebral lumbar umbhunu. symptomatology
Esikhathini kusaqalwa isifo ematfuba indawo okuvela kuyo okuthiwa ubuhlungu buthuntu esifundeni lumbar, okuyinto kwezemidlalo luzoqiniswa. Ngandlela-thile kamuva, zingase zibe khona ezinye izimpawu, njenge:
emva ukunyakaza ngokushesha (isib rotations) waphawula ngokudubula ubuhlungu esifundeni lumbar;
nezinkinga uhlelo genitourinary (ubuhlungu, uhudo, incontinence, ukuqunjelwa, njll ...);
ukungabi namizwa iminwe noma ukuba ndikindiki nokunsonsotha endaweni imbilapho.
Kwezokwelapha, izindlela eziyisisekelo ekwelapheni lesi sifo kuthiwa kunemibandela ihlukaniswe yokusebenza olandelanayo. Laba futhi ihlukaniswe yaba medicated futhi okungezona medicated. izindlela okulondoloza ezihilela ukusetshenziswa ukutshopa, acupressure, isicelo izinhlobo ezihlukahlukene zezindwangu ezingaba amakhambi abantu.
hernia Intervertebral. ukusebenza
Le ndlela isetshenziswa kuphela ngemva uthole ukucwaningwa okuningiliziwe nguchwepheshe. Kulesi simo inkinga ingaxazululwa ngokuyinhloko, okungukuthi, ngumuntu ukuhlinzwa hernia ngokushesha asuswe. Relief emva kokuhlinzwa siyenzeka ngokushesha, kodwa indlela yokuhlinzwa yokuxazulula le nkinga, zikhona nemiphumela ethile engathandeki. Ngokwesibonelo, kungenzeka ukuthi ukusebenza, udokotela angase uthinte emgogodleni, ngakho-ke, isiguli luyakwazi ahlale zikhutshaziwe. Ngaphezu kwalokho, kunobufakazi isifo yansukuzonke zokwelapha. Odokotela batusa ukuba iphendukele ukuhlinzwa kuphela uma ukwelashwa ngoludala ungayeki imiphumela elindelekile.
Erythremia - Iyini? eritremii esiteji
Umdlavuza Wamaphaphu: Izimbangela, Izimpawu kanye Ukwelashwa
Ukwelashwa nokuvikelwa laryngitis ezinganeni.
Amafutha ngenkuni engaphakathi kwemisebenzi: izinzuzo, izici zesicelo
Kuyini i-krschon? Iresiphi yesiphuzo esidala futhi esingelona utshwala, ukukhonza umkhuba
Kungani oblazit isikhumba iminwe, futhi lokho udokotela ukuya?
Population futhi indlela kwezibalo zocwaningo. Lokho wokucwaninga ngezakhi zofuzo indlela labantu-kwezibalo?
Isakhiwo wamaphaphu womuntu
MegaFon Ngemvume 3: Impendulo. Ithebhulethi entsha MegaFon Ngemvume 3: Ukubuyekeza, intengo, Izithombe
"Sarafanka" kuyokusiza ukuba uthole kufika ku- $ 3000 ngenyanga
Indlela ukupheka uphudingi ikhabe ukunambitheka olukhuni kunazo